'' Xisbiyaddu Maxay Rabaan ? ''.
Saturday November 30, 2019 - 10:28:49 in Articles by Hadhwanaag News
Xeerka ismaamulka goboladda iyo degmooyinka somaliland
ee loo yaqaano xeer No 23/2003/2006 wuxuu ku waajibayay dawladda hoose adeegyadan hoos ku xusan ee ay ka mid yihiin .
1- Biyaha ,
3- Waxbarashadda aasaasiga ah ,
4- Wadooyinka .
6- Nabadgelyadda .
Adeegyadaas oo ah , adeegyadda aasaasiga ah ee bulshaddu u baahan tahay .
Dhinaca kale , miisaaniyad sanadeedka 2020 ee dhawaan xukuumaddu usoo gudbisay Baarlamaanka Somaliland , waxaa ku xusan bajadyada Degmooyinka waawayn ee ay ka mid yihiin .
1- Hargaysa 14 malyuun .usd
2- Berbera 12 Malyuun .usd
3- Gabiley 4 Malyuun .usd
4- Burco 3 Malyuun .usd
Hadaba sidaas oo ay tahay , golihii deegaanka ee ugu horeyey somaliland waxaa la doortay 2002 , mudadiisuna waxay ku dhamayd 2007 , hassa yeeshee wuxuu fadhiyay ilaa 2012 isagoo joogay 3 sanno oo dheeraadda .
waqtiyadii golahaasi ku joogay dheeraadka ee 2007-2010 , waxay ahayd waqtigii doodihii mucaaridku ugu adkaayeen , hassa yeeshee goleyaasha deegaanka la iskuma haysanin .
waa maxay sababtu ?
2- Golaha guurtidda waxaa lasoo xulay 1997 , oo ahayd cahdigii beelaha , hanaankan cusub ee doorashooyinkana kama aanay qayb gelin , welina lama soo dooran .
Golahaasina Waa golaha sarre ee baarlamaanka wadanka , waxaana mara dhamaan xeerarka kasoo gudba golaha hoose ee baarlamaanka , waxaana u dheeraada , Muddo kordhimaha iyo Nabadgelyadda .
Hadana golahaa mudada dheer fadhiyay axsaabtu iskuma haysato , waayo ?
3- Golaha wakiiladda waxay mudadu kagga dhamaatay 2010 markii kulmiye taladda la wareegay , waa loo kordhiyay hadana cidi isma waydiinin .
Mar kale , 2012 ayaa loo kordhiyay , cidi isma waydiinin .
weli way socotaa , xisbiyaduna golahaa doorashadiisa aad uma xiisaynayaan sida goleyaaha kale , waa maxay sababtu ?
Axsaabtu ma fahansana muhiimadda goleyaashaasi leeyihiin siyaasad ahaan , waxqabad ahaan iyo muuqaal ahaan , maadama oo aanay lahayn aragtiyo siyaasadeed oo balaadhan .
Sidaa awgeed , waxay isku eryadaan kursiga madaxwayne oo suke ah , kaasoo ay rabaan in ay dusha kaga yimaadaan , halkii ay hoosta kaga iman lahaayeen , maxaa yeeley axsaabtu maaha kuwo leh afkaar siyaasadeed oo balaadhan